National Archive - Jerung Films
लकडाउनको परिणामले देखिएको राजधानी काठमाण्डौंको अवस्था यस्तो छ भिडियो सहित
२०, चैत्र –२०७६ काठमाण्डौं । कोरोना भाईरसको संक्रमण पछि राजधानी काठमाण्डौको अवस्था निकै कष्टकर बनेको छ । जनजिवनको हित र संक्रमणसँग बच्न सरकारले एककासी लकडाउनको घोषणा गरेपछि आम जनता मारमा परेका छन् । आम सर्बसाधारण घरबाट निस्कन नदिए पछि यतिखेर राजधानी काठमाण्डौं सुनसान बनेको छ । सडकको अवस्था हेर्दा सरसफाइमा भने निकै सुधार आएको छ । चिल्लो र सफा सडकमा मानव आवतजावत शून्य छ । प्रहरी र सुरक्षाकर्मीले कुनै पनि आम सर्बसाधारण नागरिक र सवारीसाधनलाई आवतजावतमा पूर्ण रुपमा ठप्प...
चीनबाट करौडो रुपैया खर्चिएर ल्याएको समान नक्कली पुष्टी भएपछि प्रयोग नगर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयकै निर्देशन
चैत्र १९, बुधबार, २०७६ काठमाडौं | बजार मूल्य भन्दा सात गुणासम्म बढी खर्चिएर ल्याएका सामाग्री नक्कली भेटिएका छन्। केही सामाग्री नक्कली पाइएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले त्यस्ता सामग्री प्रयोग नगर्न निर्देशन दिएको छ । सरकारले ओम्नी ग्रुपमार्फत किनेको र्यापिड डायग्नोष्टिक किट नै नक्कली भएको र त्यसलाई प्रयोगमा नल्याउन निर्देशन दिएको छ । सरकारले यो किट बजार मूल्य भन्दा चार गुणा बढी मूल्यमा खरिद गरेको थियो । स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्रतिकिट ८ डलरका हिसावले ७५ हजार थान किनेको थियो । त्यो सबै गुणस्तरहीन...
चैत १९, २०७६ काठमाडौं : सरकारले कोरोना संक्रमण रोक्न चीनबाट स्वास्थ्य सामग्री खरिद तथा आपूर्तिका लागि ओम्‍नी ओबिसिए ग्रुपसँग गरिएको ठक्का सम्झौता रद्द गरेको छ। कोरोना संक्रमण रोक्न आवश्यक स्वास्थ्य सामाग्री आपूर्तिका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले ओम्‍नी समूहसँग एक अर्ब २४ करोड रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो। उक्त समूहसँगको ठेक्का विवादमा परेको थियो। ठेक्का सम्झौता तोडिएको जानकारी बुधबार आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक महेन्द्र श्रेष्ठले दिएका छन्। ‘हामीले उहाँहरुले हालेको प्रस्ताव भन्दा ०.५ प्रतिशत घटाएर प्रस्ताव पास...
नेपाल सरकारले खडा गरेको आपतकालिन कोषमा हिमानी शाह कोषद्वारा २ करोड सहयोग गर्ने घोषण
राजकुमार राई १९, चैत्र–२०७६, काठमाण्डौं । कोरोनाभाइरस (कोभिड १९) को रोकथामका लागि नेपाल सरकारले खडा गरेको आपतकालिन कोषमा हिमानी शाह कोषले २ करोड सहयोग गर्ने भएको छ । कोरोनाभाइरस संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार लागि सो कोषमा २ करोड रुपैयाँ सहयोग गर्ने घोषणा गरिएको पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै बताएका हुन् । दुःख कष्ट र आपत विपदको घडीमा सबैका साथमा साथ दिँदै आफ्नो तर्फबाट सहयोग गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । पूर्व राजा शाहले मानव अस्तित्व...
स्वास्थ्य सामाग्री महँगोमा ल्याएको भन्दै ऋषि धमलाको कडा प्रश्न, स्वास्थ्यसेवा विभागका महानिर्देशक डा श्रेष्ठ अक्क न बक्क
१८, चैत्र– मंगलवार, २०७६ काठमाण्डौं । यतिखेर स्वास्थ्य मन्त्रालयले खरिद गरेको स्वास्थ्य सामाग्रीको विषयमा चर्को आलोचना भइरहेको छ । बजारको मूल्य भन्दा दोब्बर गुणा महँगोमा सामाना ल्याएको,स्वास्थ्य मन्त्रीले टेण्डरको कुरा नै नसुनी आफ्नो मनोमानी ठेक्दारलाई सामान खरिद गर्न दिएको तथा आर्थिक चलखेल घोटाला भएको जस्ता अनेक कुराहरु सामाजिक सञ्जालमा छाइरहेको छ । यस विषमा जनताको गुनासो मेटाउन पत्रकार ऋषि धमलाले जनता जान्न चाहान्छन कार्यक्रममा स्वास्थ्यसेवा विभागका महानिर्देशक डा. महेन्द्र कुमार श्रेष्ठसँग कडा बहस गरेको छ । प्राईम टाईम्स टेलिभिजनबाट...
साझापोष्ट टिप्पणी/काठमाडौं, १८ चैत । ५ दिन बढी भइसक्यो, दार्चुलापारि महाकाली किनारमा मान्छे अलपत्र छन् । सामाजिक सञ्जालमा फोटो र भिडियो छ्यापछ्याप्ती छ । फोनबाट बुझ्दा त्यहाँको स्थिति निक्कै भयावह छ । नेपाल पस्न चाहने ठूलो हुलले नदी किनारमै रात बिताई रहेका छन् । केही मान्छे महाकाली नदीमा हाम्फालेर नेपाल पस्ने प्रयत्न गरेका छन् । उनीहरुलाई पनि पुलिसले छोडेको छैन । नदीमा जोखिम मोलेर हेलिएकाहरुले आफ्नो कुम्लो कुटरो पारी नै छोडेर ज्यान मात्र जोगाउन चाहेको प्रष्टै बुझिन्छ । तर...
एक अर्ब २४ करोडको खरिदमा भ्रष्टाचारको इतिवृत्तान्त : तीन घन्टा भित्रै विना प्रतिस्पर्धा ठेक्का, नेपाल सरकारलाई सात प्रश्न यो भ्रष्टाचार होइन भने के हो ?
सुवास भट्ट , चैत १७ सोमबार २०७६ काठमाडाैं| ३१ डिसेम्बर २०१९ अर्थात् गत १५ पुसमा नै चीनको वुहानमा कोरोनाको पहिलो संक्रमण देखिएको थियो । तर, स्थानीय हुबेई प्रशासनले त्यसलाई पहिचान र नियन्त्रण गर्न आन्तरिक रूपमै कसरत गर्‍यो । तीन साताको प्रयास असफल भएपछि चीनले २० जनवरीमा कोरोना आउटब्रेकको घोषण गर्‍यो । त्यसको तेस्रो दिन २३ जनवरीमा वुहान सम्पूर्ण रूपमा लकडाउन भयो । वुहान लकडाउन भएपछि विश्वको ध्यान आकृष्ट भयो । त्यतिञ्जेलसम्म १३ जनवरीमा थाइल्यान्ड, २० जनवरीमा दक्षिण कोरिया र २३ जनवरीमा भियतनाममा कोरोनाको संक्रमण...
सिंहदरबार प्रवेशमा कडाइ,मन्त्री,सुरक्षाकर्मी तथा सञ्चारकर्मीलाई समेत स्वास्थ्य यन्त्रद्वारा ज्वँरो मापन गरिने |
चैत्र, १६ आईतवार २०७६ काठमाण्डौं । सिंहदरबार प्रवेशमा सरकारले कडाइ गरेको छ । कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि उच्च सतर्कता अपनाउन सरकारले कडाइ गरेको हो । आधुनिक ज्वँरो मापन यन्त्रबाट स्वास्थ्य परिक्षण गरेर मात्र मन्त्री,सुरक्षाकर्मी तथा सञ्चारकर्मीलाई सिंहदरबार प्रवेश गराइने भएको छ । अत्यावश्यक कामबाहेकका मानिसहरुलाई घरबाट निस्किन दिएको छैन् । मुलुकको मुख्य प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारमा नियमितजस्तो कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणसम्बन्धी उच्चस्तरीय समन्वय समितिको बैठक बसिरहेको छ । आजपनि समितिको बैठक बसेको थियो । बैठक प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा...
कोभिड–१९ को उपचार सामाग्री खरिदमा डुबायो देशलाई, एउटै मास्कमा ५ सय फरक, पिसिआर मेसिनमा १० हजार डलरको फरक
काठमाडौं । कोभिड–१९ को उपचारका लागि आवश्यक पर्ने औषधि,पिपिई, परीक्षण आदिका लागि चाहिने सामाग्री गरिदमा स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाल नेतृत्वको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सरकारलाई ठूलो आर्थिक नोक्सानी हुने गरी सामाग्रीहरु खरिद गरेको पाइएको छ । हालै सार्वजनिक भएको १९ प्रकारका सामाग्रीहरुको मूल्य सूची सार्वजनिक भएपछि भन्त्री ढकाल नेतृत्वको टोलीले कसरी देशलाई हानी पुर्यायो भन्ने खुल्दै गएको हो । आवश्यक उपकरण, कोरोना पत्ता लगाउने किट आदिको खरिदमा जुन मूल्य मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको छ, ती सामाग्रीको अन्तर्राष्टिय मूल्य सरकारले खरिद गरेको...
लकडाउन कम्तीमा एकसाता लम्ब्याउने सरकारको तयारी
चैत १६ आइतबार २०७६ काठमाडौं । सरकारले लकडाउन (बन्दाबन्दी) कम्तीमा एकसाता लम्ब्याउने भएको छ । मंगलबारबाट सुरु भएको बन्दाबन्दी सोमबार सकिँदैछ । कोरोना सङ्क्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिले कम्तीमा एकसाता लम्ब्याउने गरी त्यसको गृहकार्य गरिरहेको स्रोतले जानकारी दियो । “यस्तो अवस्था छ । सङ्क्रमित थपिन थालेका छन् । बेलुकी मन्त्रिपरिषद्को बैठकले त्यसबारे आवश्यक निर्णय गर्छ । झन् सतर्कता अपनाउनुपर्ने परिस्थिति छ,” स्रोतले बाह्रखरीसँग लम्बिने सम्भावना बतायो । बन्दाबन्दी कम्तीमा एकसाता लम्ब्याउने तयारी रहेको स्रोतको दाबी छ । ...